उत्तरदायी शासन र जनमुखी प्रशासन प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक हक हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा, शासक र प्रशासकले जनहितका कार्य गरेमा र देशमा सुशासन कायम भएमा मात्र जनताले सो हकको उपयोग गर्न पाउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको पूर्व शर्त हो । त्यसैले हरेक शासकलाई शासनसत्ताको अभिभारा सुम्पनु पूर्व राज्यमा कत्ति पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने, विधिको शासन र सुशासन कायम गराउने शर्त राख्नुपर् ... read more...
सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन अनेक प्रसास गर्दै आएको छ । कर्मचारीलाई कर्तव्य र अनुशासनमा बाँधीराख्न विभिन्न नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था भएको छ । कर्मचारीले आफ्नो मनोवृति र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्नेछु प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिरहेकै हुन्छन् । तर कर्मचारीवृतमा अपेक्षित सुधार भने भएको देखिदैन । ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भई जनताको सेवामा समर्पित हुने सपथ खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका ... read more...
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायाण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेका छन्, घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् । अर्कोतिर, मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार निवारणका लागि एकमात्र सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्ट भयो ? कारबाही गर्ने निकाय अब कुन हुनसक्छ ? अख्तियारका जस्तो संवैधानिक अंगका रहेका आयुक्त र कर्मचारीमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । ७८ लाख घुस ... read more...
प्रकृति प्रति कृतज्ञता र आराध्यदेव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि आइतबारदेखि सुरू भएको छ । मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन ( चतुर्थी ) को विधिमा अरबा–अरबाइन गरिन्छ, जसलाई नहाय–खाय पनि भन्ने गरिएको छ । दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने विधि गरिन्छ । यस पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगिता, सुख ,समृद्धि र चर्म रोग निको हुने ... read more...
गत आइतबार भारतको पूणेमा भएको बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासको समापनपछि भारतका प्रधानसेनापति विपीन रावतले 'भौगोलिक बाध्यताका कारण नेपाल भारतबाट टाढा जान सक्तैन र चीनसँग पनि नजिकिन अनुकूल हुँदैन' भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपालको बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा नाक खुम्च्याउने र हलुका टिप्पणी गर्नेहरुको लहर चलेको छ । तर मचाहिँ भारतीय सेनाध्यक्ष विपीन रावतको टिप्पणीलाई स्वाभा ... read more...
युवा भनेको देश विकासका ऊर्जा हुन् जसको आँट र हिम्मतबाट देश विकास संभव छ । युवाहरुको सहि स्थानमा सदुपयोग र परिचालन हुन सके जुनसुकै मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्छ । युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा पोख्न सके मुलुकमा विकासले काचुली फेर्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।देशको मुहार फेर्न र मुलुकको विकास अघि बढाउन युवा जनशक्ति अपरिहार्य छ । युवावर्गको महत्व र आवश्कयतालाई बुझेर उनीहरुको उर्जालाई राष्ट ... read more...